GỤỌ NKE Albanian Amharic Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French German Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian
“Àgwà nke ịchọkarị izu okè fọrọ nke nta ka ọ na-achịkwa ndụ m nile.”—Carly.
ỊCHỌKARỊ IZU OKÈ—nkwenye bụ́ na mmadụ aghaghị ịbụ onye zuru okè n’ihe nile ọ na-eme—na-emetụta otú ọtụtụ ndị ntorobịa si eche echiche.
Akwụkwọ bụ́ Perfectionism—What’s Bad About Being Too Good? (Ịchọkarị Izu Okè—Olee Ihe Ọjọọ Dị n’Ịdịbiga Mma Ókè?) na-ekwu, sị: “E nwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti ọchịchọ kwesịrị ekwesị nke imezi ihe emezi na ịchọ n’ụzọ gabigara ókè imeta ihe nile otú na-agaghị ekwe omume. Ọ pụrụ ịdịsi ndị na-agbalị imezi ihe emezi mkpa ike ịhụ na ihe nile dị nnọọ n’usoro na a hazikwara ha ahazi, ha na-atụkwa anya oké ihe n’aka onwe ha, ma ha na-anabatakwa ihie ụzọ ha ma na-enwe ụzọ ndị dị mma isi mee ihe banyere ha. . . . N’aka nke ọzọ, ndị na-achọkarị izu okè na-echegbu onwe ha mgbe nile banyere imehie ihe. Ha na-enwe ụkpụrụ ndị dị oké elu.”
Ọ̀ bụ otú ahụ ka ị dị? Ọ bụrụ na ụkpụrụ gị dị elu gabiga ókè, ị pụrụ ịghọ, n’ụzọ dị mfe, onye ọ na-esiri ike ime ihe ọ bụla. Ị pụrụ ịchọpụta na ị na-ezere ime ihe ọhụrụ ọ bụla. Ma ọ bụ, ị pụrụ iji n’ihi ụjọ ịkụ afọ n’ala na-eyigharị ime ihe ndị dị mkpa. Ị pụrụ ọbụna ịchọ ịjụ onye ọ bụla nke na-emerughị ihe otú ị chọrọ ya, ị pụrụ ịghọ onye na-enwekwaghị ndị enyi.
Ọ bụrụ na ihe e kwuru n’elu bụ eziokwu n’ụzọ ọ bụla banyere gị, tụlee ihe Bible kwuru n’Eklisiastis 7:16: “Abụbigala onye ezi omume ókè; emekwala onwe gị onye mabigara ihe ókè; n’ihi gịnị ka ị ga-emebi onwe gị?” Ee, onye na-achọkarị izu okè pụrụ ‘imebi’ onwe ya! N’eziokwu, ọbụna e jikọtawo ịchọkarị izu okè na nsogbu iri ihe bụ́ ndị na-eyi ndụ egwu dị ka nsogbu achọghị iri ihe na iribiga nri ókè. *
Ya mere, ị pụrụ ịjụ sị, ‘Olee otú m pụrụ isi kwụsị ịgbalị ịchọ izu okè?’ N’ezie, mmadụ ịgbanwe echiche ya banyere nke a pụrụ ịbụ ihe siri ike. Ma site n’enyemaka Chineke, a pụrụ ime ya. Ya mere, ka anyị hụ otú Chineke si ele ịchọkarị izu okè anya.
Izu Okè—Ọ̀ Bụ Ihe Mgbaru Ọsọ A Pụrụ Iru Eru?
Nke mbụ, ọ̀ ga-ekwe gị omume izu okè n’ụzọ nile? Ọ gaghị ekwe omume dị ka Bible si kwuo, bụ́ nke na-asị: “Ọ dịghị onye ezi omume dịnụ, ọbụnadị otu . . . Mmadụ nile agahiewo, ha nile aghọwo ndị na-abaghị uru.” (Ndị Rom 3:10-12) Okwu ndị a na-akpali iche echiche, ọ́ bụghị ya? Ha na-egosi na onye ọ bụla nke na-agbalị izu okè n’ụzọ nile ga-akụ afọ n’ala.
Cheedị echiche banyere Pọl onyeozi, bụ́ onye o doro anya na ọ bụ ihe nlereanya pụtara ìhè nke onye ji ihe ime mmụọ kpọrọ ihe. N’agbanyeghị nke ahụ, ọbụna Pọl apụghị ijere Chineke ozi n’emehieghị ihe. O kwupụtara, sị: “Mgbe m chọrọ ime ihe ziri ezi, ihe ọjọọ na-anọ n’ebe m nọ. N’ezie, iwu Chineke na-eme m obi ụtọ, dị ka mmadụ m bụ n’ime si dị, ma ana m ahụ n’ahụ́ m iwu ọzọ nke na-alụso iwu nke uche m agha, na-adọrọkwa m n’agha gaa n’iwu nke mmehie nke dị n’ahụ́ m.” (Ndị Rom 7:21-23) Ọ bụ nanị site n’enyemaka Chineke ka Pọl pụrụ ikwesị ntụkwasị obi dị ka Onye Kraịst.
Ọ dabara nke ọma na Chineke adịghị achọ ma ọ bụ na-atụ anya izu okè n’ihe nile n’aka anyị. “N’ihi na ya onwe ya maara otú a kpụworo anyị, ọ na-echeta na ájá ka anyị bụ.” (Abụ Ọma 103:14) Ọ bụ nanị n’ime ụwa ọhụrụ Chineke ka ụmụ mmadụ ga-ezu okè n’ikpeazụ.
Gbanwee Ihe Ndị Ị Na-atụ Anya Ha
Ka ọ dịgodị, ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya iche na ị pụrụ izu okè n’ụzọ nile. N’ezie, i kwesịrị ịtụ anya ịdị na-emehie ihe site n’oge ruo n’oge. (Ndị Rom 3:23) N’ezie, mgbe ụfọdụ anyị anadịghị ama mgbe anyị mehiere ihe! Abụ Ọma 19:12 na-ekwu sị: “Ọ dịghị onye pụrụ ịhụ njehie ya.” (Today’s English Version) Otu onye ntorobịa aha ya bụ Matthew si otú a kwuo ya: “I zughị okè—ọ dịghị onye zuru okè n’Ụwa. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya izu okè n’aka onwe gị, ọ dịghị ihe ga-eme ka i nwee obi ụtọ. . . . Ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya, ọ gaghị ekwe omume.”
N’iburu nke a n’uche, ọ́ gaghị adị mma ịgbanwe ihe ndị ị na-atụ anya ha? Dị ka ihe atụ, ị̀ na-akpatara onwe gị ike ọgwụgwụ site n’ịgbalị ịbụ onye kasị emeta otu ihe? Bible na-egosi na ụdị mgbalị ahụ nke na-agwụ ike pụrụ n’ezie ịbụ “ihe efu na ịchọ ijide ifufe.” (Eklisiastis 4:4) Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụ mmadụ ole na ole na-enwe ike aghọ ndị kasị emeta ihe. Ọ bụrụgodị na mmadụ abụrụ onye kasị emeta ihe, ọ naghị adị anya e nwee onye ọzọ ka ya mma.
Pọl onyeozi dụrụ ọdụ, sị: “Ana m agwa onye ọ bụla n’etiti unu n’ebe ahụ ka ọ ghara iche banyere onwe ya karịa ka ọ dị mkpa iche; kama ka ọ na-eche echiche iji nwee uche zuru okè.” (Ndị Rom 12:3) Jiri ezi uche na-eme ihe! Gbanwee ihe ndị ị na-atụ anya ha ka ha kwekọọ n’ihe ndị ị pụrụ ime na ihe ndị ị na-apụghị ime. Chọọ imezi ihe emezi, ma achọla izu okè. Setịpụ ihe mgbaru ọsọ a kapịrị ọnụ nke a pụrụ iru eru.
Dị ka ihe atụ, Pọl gbara Timoti ume ka ọ bụrụ “onye ọrụ nke na-enweghị ihe ọ ga-emere ihere, na-ejizi okwu nke eziokwu ahụ ejizi.” (2 Timoti 2:15) Ee, Pọl gbara ya ume imezi ihe emezi, ma ọ bụghị izu okè. N’otu aka ahụ, setịpụrụ onwe gị ihe mgbaru ọsọ ndị ezi uche dị na ha. Ọ bụrụkwa na i jighị n’aka ihe bụ “ihe ezi uche dị na ya,” gị na ndị mụrụ gị ma ọ bụ onye ọzọ toruworo ogo mmadụ nke ị tụkwasịrị obi kwurịta ya.
Ụfọdụ ndị na-atụ aro ọbụna ka ị mara ụma gbalịa ime ihe ụfọdụ ndị ị na-amachaghị eme, dị ka ịmalite ime otu egwuregwu ọhụrụ ma ọ bụ ịkpọ otu ngwá egwú. N’ezie, ka ị na-amụ otu ihe ọhụrụ, ị ga-emehierịrị ihe ọtụtụ mgbe. Ma nke ahụ adịchaghị njọ. Ikekwe ọ ga-enyere gị aka ịhụ na imehie ihe bụ nnọọ ihe ya na ịmụta ihe na-agakọ.
Ihe ọ bụla ị chọrọ ime—ma ọ bụ ide ihe banyere otu isiokwu e nyere gị n’ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ ịmụta otú e si akpọ ngwá egwú piano—tụlee ndụmọdụ ọzọ Pọl onyeozi nyere: “Unu adịla umengwụ n’ihe unu na-eme.” (Ndị Rom 12:11) Ee, adịla na-eyigharị ihe nanị n’ihi na ị na-atụ ụjọ ịkụ afọ n’ala.
Otu onye ntorobịa mere ka ọ bụrụ ihe maara ya ahụ́ bụ́ ịdị na-eyigharị ide ihe e nyere ya n’ụlọ akwụkwọ ka o dee site n’inye ihe ngọpụ bụ́ na ya “na-akpakọ onwe ya ọnụ.” Ọ bụ ezie na mmadụ ịkpakọ onwe ya ọnụ dị mma, kpachara anya ka ọ ghara ịbụ ihe mgbakwasị ụkwụ iji na-eyigharị ihe ị ga-eme. Nwatakịrị nwanyị a bịara ghọta na “mgbe mmadụ na-aghaghị ime mkpebi n’agbata inyefe ihe odide e nyere ya n’ụlọ akwụkwọ ka o dee, bụ́ nke ọ na-edetachaghị otú ọ chọrọ na enyefeghị ya enyefe, na ọ ka mma inwe nke o nyefere.”
Jụ Echiche Ndị Na-akpata Nkụda Mmụọ
N’eziokwu, o nwere ike ịdị na-enye gị nsogbu n’obi mgbe ị rụrụ ọrụ na-adịchaghị mma. Echiche na-ezighị ezi, nke ịma onwe onye ikpe ka pụrụ ịdị na-agbata gị n’uche. Gịnị ka ị pụrụ ime? Nke bụ́ eziokwu bụ na ịnọgide na-atụgharị uche n’echiche ndị na-ezighị ezi pụrụ ịkpata nkụda mmụọ. Ya mere, gbalịsie ike iwepụ echiche ndị na-ekwesịghị ekwesị banyere onwe gị n’uche gị. Jiri mmehie ihe gị mere ihe ọchị. E kwuwerị, e nwere “mgbe ịchị ọchị.” (Eklisiastis 3:4) Chetakwa na Jehova adịghị akwado okwu mkparị—ọbụna mgbe anyị gwara ya onwe anyị.—Ndị Efesọs 4:31.
Kama ịdị na-akatọ onwe gị mgbe nile, tinye ihe e kwuru n’Ilu 11:17 n’ọrụ: “Onye na-emeso mkpụrụ obi ya ezi ihe ka onye ebere bụ: ma onye na-emekpa anụ ahụ́ nke aka ya ahụ́ ka onye na-enweghị obi ebere bụ.” Ya mere, chebara ajụjụ a echiche, Isetịpụrụ onwe gị ụkpụrụ ndị dị elu gabiga ókè, ò mewo ka ọ dịrị gị mfe inwe ndị enyi? Ma eleghị anya o mebeghị. Ọ pụrụ ọbụna ịbụ na ị jụwo ụfọdụ ndị n’ihi na ha adịghị eme ihe n’ụzọ zuru okè. Ya mere, gịnị ka ị pụrụ ime?
Tinye iwu ahụ Bible nyere n’ọrụ: “Nọgidenụ na-anagiderịta ibe unu ma na-agbaghara ibe unu kpam kpam ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe mere ọ ga-eji mee mkpesa megide ibe ya.” (Ndị Kọlọsi 3:13) Ee, site n’iji ezi uche eme ihe karị n’ihe ị na-atụ anya ya n’aka ndị ọzọ, ị ga-eme ka o kwe omume karị inweta ọṅụ nke inwe ndị enyi!
Ma, ị pụrụ iche, sị, ‘Gịnị mere ndị ọzọ ga-eji na-ezere m n’ihi àgwà m nke ịchọkarị izu okè?’ Tụlee mmetụta ọ na-enwe n’ahụ́ ndị ọzọ mgbe ị na-ekwupụta oké ihe ndị ị na-atụ anya ha n’aka onwe gị. Akwụkwọ bụ́ When Perfect Isn’t Good Enough na-akọwa, sị: ‘Ime oké mkpesa mgbe ọ bụla i nwetara akara na-erughị akara ị tụrụ anya ya n’ule pụrụ ịbụ mkparị nye ndị enyi gị, bụ́ ndị na-aghaghị ịgbalịsi ike inweta akara i nwetara.’ Ya mere, gbalịsie ike ibelata ịdị na-ekwu okwu na-akụda mmụọ na ịdị na-eche nanị maka onwe gị. Ndị mmadụ ga na-enwe mmasị karị ka gị na ha na-anọ.
Carly na-eto eto chịkọtara okwu ahụ ọnụ mgbe ọ sịrị: “N’ụzọ bụ́ isi, ana m asị àgwà nke ịchọkarị izu okè m ka o nye m ohere.” Olee ụzọ ị pụrụ isi mee nke a? Tụgharịa uche n’otú Chineke si ele ihe anya. Ọ bụrụ na ọ ka na-esiri gị ike ịchịkwa otú i si eche echiche n’akụkụ a, soro ndị mụrụ gị ma ọ bụ Onye Kraịst tozuru okè nke nọ n’ọgbakọ unu kwurịta ya. Kpegara Chineke ekpere ma rịọ ya ka o nyere gị aka ịgbanwe echiche gị. Ekpere pụrụ ịbụ ngwá ọgụ dị ike iji lụsoo àgwà ịchọkarị izu okè ọgụ.—Abụ Ọma 55:22; Ndị Filipaị 4:6, 7.
Na-echeta mgbe nile na Jehova adịghị achọ izu okè; nanị ihe ọ na-atụ anya ya n’aka anyị bụ ka anyị kwesị ntụkwasị obi nye ya. (1 Ndị Kọrint 4:2) Ọ bụrụ na ị na-agbalịsi ike ikwesị ntụkwasị obi, ị pụrụ inwe obi ụtọ n’ezie banyere ụdị onye ị bụ—ọ bụ ezie na ị dịghị emeta ihe nile n’ụzọ zuru okè.
^ par. 7 Lee isiokwu bụ́ “N’ihi Gịnị Ka M Ji Eche na Aghaghị M Izu Okè?” nke dị ná mbipụta anyị nke August 8, 2003.
Ụjọ ịkụ afọ n’ala pụrụ ime gị ka ị ghara ịdị na-eme ihe ọ bụla
Ịgbalị ịmụta ihe ndị ọhụrụ pụrụ inyere gị aka ime ihe banyere ihie ụzọ gị
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú M Pụrụ Isi Kwụsị Ịgbalị Ịchọ Izu Okè?